China vepo Iweghachite valvụ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jiasheng
1.Aluminium alloy anwụ-nkedo Ọdịdị, anodized ọgwụgwọ.
2. Udiri ogwugwu nke oge opupu ihe ubi, akari ngwa ngwa ma sie ike.
3. ratedgba mmiri dị elu dị elu karị, mgbada mgbali ala.
4. Mfe iji wụnye.
5. A na-enweta ya na ngwugwu TTMA niile.
6. Iji pneumatic njikwa ịchịkwa oghere na mmechi.
8. 1/4 NPT ikuku ikuku.
9. Na-ezute ọkọlọtọ EN13083, flange na-ezute ọkọlọtọ TTMA.
Onye na-ere ihe kacha mma na alumini nke na-agba mmanụ ụgbọ mmiri na-agbapụta ụgbọ mmiri maka tank ụgbọ ala
Iji wụnye na mkpuchi Manhole ma ọ bụ n'elu tankị ahụ. Ejikọtara akụkụ ọpụpụ na eriri roba na ọkpọkọ mgbake nke alụlụ. Mgbe tankị ahụ na-ebugharị ma ọ bụ na-ebudata iji chịkwaa vepo na-abata ma ọ bụ pụta na tanker.This bụ ihe dị oke mkpa maka usoro mgbake vapo.
aha ngwaahịa tanka mmanụ ụgbọ mmiri Alụlụlụ mgbake valvụ
nha 3 ”
elu okpomọkụ -20 ℃ - + 70 ℃
ọkara peturuolu, manu oku, mmanụ dizel, mmiri, wdg
ọrụ oyi na-atụ
Ntuziaka maka ojiji na uru nke aluminum alloy mmanụ ụgbọ mmiri tanker vepo mgbake vent valvụ
Iji wụnye na mkpuchi Manhole ma ọ bụ n'elu tankị ahụ. Ejikọtara akụkụ ọpụpụ na eriri roba na ọkpọkọ mgbake nke alụlụ.
* Ọgwụgwọ siri ike
A na - agafe usoro valvụ ahụ niile iji meziwanye ndụ ọrụ ya.
Usoro usoro iji chịkwaa valvụ dị ugbu a na-emeghe ka usoro na-achịkwa valvụ ọzọ na-emeghe.
* Ịdị mma Dị elu
The igwe anaghị agba nchara esịtidem aro akụkụ ana achi achi ya corrosion eguzogide.
* Light arọ
* Isi aru mee nke aluminom alloy, o kariri ma sie ike.
* Uko akara
* Ihe n'ụzọ dị irè di na tankị adịghị ejupụta mgbe rollover.
Item aha Valve mgbake valvụ Nọmba nlereanya YJ7509
Isi ihe Aluminom Nha: 4 ″
Usoro ọrụ Pneumatic Nrụgide ọrụ 0.6MPa
Ọnọdụ njikọ Eriri Ọnọdụ okpomọkụ -20 ~ + 70 ℃
Ọkara Dizel, mmanụ ụgbọala, manu oku Ọkọlọtọ API1004 & EN13083
A na-etinye valvụ mgbake ọkụ na mkpuchi nwoke ma ọ bụ n'elu tankị iji zere mmanụ na mmanụ gas na-arụ ọrụ na ibudata maka iweghachi n'ime.
Mgbe tankị ụgbọ mmiri ahụ na-ebu ma na-ebudata, ọ na-eji onye na-ekpo ọkụ ọkụ iji mepee poppet valvụ ahụ iji jigide ngwa ngwa nke mmanụ na gas, imegharị ihe, akara dị irè na nrụgide nrụgide.
Ihe Valve mgbake valvụ
Model Nke YJ7508
Isi Meterial Aluminom alloy
Ratingzọ Ọrụ Pneumatic
Nrụgide Ọrụ 0.6MPa
Ọkara Mmanụ, Kerosene, Diesel
Okpomọkụ Nso -20 ~ + 70 ℃
Ọkọlọtọ Kpụrụ EN13083, Flange na-ezute ụkpụrụ TTMA.
Nha 4 ″
Nke gara aga: Frence API nkwụnye valvụ
Osote: Ihe nkwụnye ọkụ ọkụ ọkụ
Fuel Tank API ustjá Cover
Nka na ụzụ Nkọwa aha ngwaahịa Api nkwụnye valve mmanụ uzuzu okpu Nkịtị dayameta 4inch Nkịtị Nrụgide 0.6Mpa Mepee ọnọdụ akwụkwọ ntuziaka ihe aluminom alloy Ọkara mmanụ dizel / gasoline na-arụ ọrụ okpomọkụ - + 70 ℃ -40 ℃ API nkwụnye valvụ mmanụ uzuzu mkpuchi maka nchekwa tank ala na-ebutu valvụ na nkukota Enweghi ike, mkpuchi mkpuchi dị mma, njikọ a pụrụ ịdabere na ya, ọnọdụ nrịba nke akara gasket roba, nwere ike igbochi ọfụma.
electric gbọmgbọm mgbapụta
A na-eji mmiri mgbapụta eletrik na-ebufe mmiri dị ọcha, nke na-adịghị ala ala, obere viscosity mmiri site na gbọmgbọm ma ọ bụ tankị ndị yiri ya. nwere ihe dị iche iche, moto dị iche iche, ọ nwere ike ịmị mmanụ mmanụ dizel, mmanụ ụgbọala, manu oku, mmanụ injin, mmanụ mmanụ, mmanụ ihe oriri, mmiri ara ehi, ihe ọ drinkụ drinkụ na kemịkal. n'ihi na mmanụ ụgbọala, methanol, mmanya, engine mmanụ 220v otu nkebi ahịrị mgbawa àmà moto viton akara mba gbawara àmà akwụkwọ maka isi nri mmanụ, mmanụ osisi, mmiri mmiri mmiri, na-ekpo ọkụ mmanụ elu ekweghị ekwe gia corrosion prote ...
Fuel Dispenser Breakaway valvụ
5-Waya Overfill Optic Nyocha na Socket
optic sensor probe arụnyere n'elu mmanụ tank manhole mkpuchi. Ọ bụ mgbochi-ejupụta nchedo ngwaọrụ. Mgbe a na-ahapụ mmanụ ka ọ banye n'ime mmanụ mmanụ, ọ na-enyocha ma na-achịkwa eriri mmanụ dị na mmanụ. Mgbe mmanụ na-aga na cordon, ihe mmetụta ga-eme ịdọ aka ná ntị iji gbochie mmanụ na-erubiga ókè ma ọ bụ na-agbapụ. Ọ bụ ezigbo nchekwa nkwukọrịta systtem. Ahụ ya nwere usoro ntinye wires abụọ. Achọrọ M20 static eliminator ka a kwadebere ya na otu gasket na otu okpu iji mepụta onye nduzi. Ọ ...
Now Flange Ball valvụ
Pịnye Ihe Flange Anya Anya Ọrụ Nrụgide Nsogbu Ọnọdụ okpomọkụ DN40 (1.5 ″) Aluminom Aluminom 85 110 0.6MPA (-20, +70) DN50 (2 ″) 90 125 DN65 (2.5 ″) 115 145 DN80 (3 ″) 130 160 DN100 (4 ″) 155 180 DN100 (4 ″) 275 240